विभिन्न तरिकामा बोसो को Salting
बोसो Salting यो उत्पादन कायम राख्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो। जनावर बोसो तयार गर्न सजिलो तरिका साधारण तालिका नुन छ र सिल कन्टेनर मा sbereganie RUB। खाना पकाउने यो विधि संग, यो पनि प्रशीतन बिना लामो समय को लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ, तर केवल एक गाढा र सुन्दर ठाउँमा।
एक सरल प्रक्रिया - घरमा बोसो को Salting। यो बोसो (मासु एक पत्र संग तपाईं) एक बोसो किन्न, सबै को पहिलो, आवश्यक छ। यो नुनीन गर्न सकिँदैन र ठूलो टुक्रा, तर यो सानो टुक्रा मा कटौती गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। तिनीहरूले यस्तो आकार तिनीहरूले गर्न सक्छन् सजिलै एक मानक तीन लीटर जार मा राख्नु र बाहिर निकाल्न सकिन्छ कि हुनुपर्छ। बोसो Salting पानी प्रि-स्नान प्रदान गर्दैन। सबै टुक्रा ध्यान नुन संग rubbed र तिनीहरूले नुन खन्याउनु गर्दा कस, बैंक मा स्ट्याक। दिन को एक जोडी पछि, बोसो "रस" गरौं, र7दिन पछि यो प्रयोगको लागि तयार छ। बैंक आवरण अप रोल गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि बोसो थप एक वर्ष भन्दा यो मा भण्डारण गर्न सकिँदैन तयार। एक नायलन अन्तर्गत फ्रिज मा राखिएको एक लामो समय को लागि यस्तो उत्पादन कवर। बोसो को Salting पनि लसुन प्रयोग संग गर्न सकिन्छ। यस मामला मा, तयार उत्पादन को टुक्रा, नुन संग rubbed कुचल लसुन संग मिश्रित। केही मानिसहरू तेजपात को बोसो टुक्रा थपियो गंध सुधार गर्न।
केही मानिसहरू आइसक्रिम बोसो प्रेम। यस्तो उत्पादन आवश्यक छ उचित बेकन, सौंफ बीउ, लसुन र नुन को तयारी को लागि। बोसो पत्र संग मासु टुक्रा5सेमी चौडाई को अनुदैर्ध्य स्ट्रिप्स मा incised छ। यस स्ट्रिप्स को लम्बाइ र उचाइ बेकन को टुक्रा को आकार मा निर्भर गर्दछ। त्यसपछि लगभग एउटै टुक्रा प्राप्त गर्न रूपमा यस्तो तरिकाले कटौती पार बनाउन। यस मामला मा, एक छाला बोसो कटौती गरिएको छैन। तपाईं ध्यान दिएर सबै पक्ष र notches मा नुन संग टुक्रा RUB गर्न आवश्यक छ। चोट लसुन र सौंफ बीउ समान रूप बेकन टुक्रा मार्फत वितरण छन्। यो तयार खाद्य उत्पादन कागज मा र्याप र एक दिन को लागि एक सुन्दर ठाउँमा बाँकी छ कि एक उपयुक्त कन्टेनर राख्नुभयो। तयार सुंगुरको बोसो को फ्रीजर मा राखिएको र खाना मा प्रयोग पछि यो चिसो। हामी लसुन संग पकाएको बोसो, एक लामो समय को लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ कि सम्झना गर्नुपर्छ।
धेरै Housewives र यो स्वादिष्ट उत्पादन तयार गर्न अर्को तरिका लोकप्रिय। यो विधि छ को नुनीन मा salting बेकन। को नुनीन 250 ग्राम नुन र पानी पिउने को 1300 एमएल को गरिनु पर्छ तयार। बेकन को सानो टुक्रा मा कटा तीन लीटर जार मा राखिएको र तयार नुनीन मा खन्याउन छ। यसलाई पूर्ण सबै टुक्रा कवर गर्न आवश्यक छ। बैंक नायलन आवरण ढाकिएको र3दिन को लागि एक सुन्दर र अन्धकारमा छोड्नुहोस्। यो समय पछि, पुरानो नुनीन भोकमरी र एउटा नयाँ खन्याउन। थप3दिन पछि प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्। प्रक्रिया बोसो salting छ नुनीन हटाइएको को अन्त्यमा, यो सकिन गरौं र subfreezing लागि फ्रीजर मा राखे। यो चिसो पछि प्रयोगको लागि तयार छ।
एक स्वादिष्ट चिसो स्टार्टर प्राप्त गर्न ठूलो तरिका - मसला संग बोसो Salting। यसको तयारी गर्न आवश्यक हुनेछ: नुन, अजवायन, तेजपात, अलैंची, जीरा, रातो र कालो मरिच, allspice, लसुन। प्रति उत्पादन को किलोग्राम 0.5 कला लिनुपर्छ। चमचा रातो वा 1 Tbsp। मरिच,5चमचा को चम्चा। चमचा 1 चमचा साल्ट। जडीबुटी र मसाले को एक मिश्रण चम्चा। यस तयार व्यञ्जन मा तयार मिश्रण को सानो भाग, मरिच हालिएको छ मीठा खुर्सानी र Laurel पात को स्लाइस। बोसो को एक पत्र राख्नु, यो राम्रो नुन-कोटिंग मिश्रण र तेजपात allspice संग, एउटै थाक निम्न पछि छर्कियो छ। एक सुन्दर ठाउँमा - यो तयार उत्पादन कोठा मा एक दिन को लागि बाँकी थियो, र अर्को5दिनमा। पाक कागज मा र्याप फ्रिज यो उत्पादन, भण्डारण गर्नुहोस्।
गाढा दूध संग पागल: क्लासिक नुस्खा। ovensWaffle मा सघन दूध संग पागल
उपयोगी र स्वादिष्ट खाना। दूध मा फर्सी संग कोदो porridge।
नाशपाती को जाम कसरी खाना पकाउनु
व्यवस्थापन निर्णयहरू लागि प्रभावकारी आधार - विषय को कुशल अस्तित्व
Waardenburg सिंड्रोम: लक्षण, गराउँछ, उत्तराधिकार प्रकार
इलेक्ट्रोलाइट्स को समाधान
झगडालु - यो हुनुहुन्छ? रोग, मानसिक विकार वा सोच को एक सुविधा - तर्क-काट के हो?
उनको मृत्यु भन्दा अघि वंगाको अन्तिम भविष्यवाणी
व्यञ्जनहरु: Marinated मशरूम
एक ह्यास समारोह छ: यो के, किन र के हुन्छ
गुप्तमा अर्थ हराएको गर्न कविता, वा कसरी गर्न को विषय के हो?
Crematorium विदाई को एक स्थान हो
आनन्द दिन्छ पोर्ट्रेट। आनन्द दिन्छ दिग्गज जिप्सी पोर्ट्रेट सबै
एक turbojet: अनुप्रयोग उपकरण र